Uninzi Unkulunkulu, Uninzi Unqulo: Bonke Akunakwenzeka
Unqulo & Umoya Ukholo no-Agnosticism
Uninzi Unkulunkulu, Uninzi Unqulo?
Iintlanga ezininzi kunye neenkolo zizathu zokungakholelwa kukho nawuphi na oothixo, iinkolo
Uninzi lwabantu ngokuqinisekileyo luyazi kakuhle ukuba luphi uhlobo lweentlobo ezahlukeneyo kwaye luye lwenziwa kwiinkonzo zabantu kwimbali yethu nakwihlabathi lonke. Kodwa andiqinisekanga, nangona kunjalo, ukuba wonke umntu uyaziqonda ngokupheleleyo zonke iimpembelelo ezinokuthi iintlobo zeenkolelo zonqulo zizenze ngokunyanisekileyo kwaye zibambe ngokunyanisekileyo. Ngaba bayaqonda, umzekelo, ukuba abanye baye babambelela kwiinkolelo zabo zonqulo njengokuba bazinikela ngokunyanisekileyo nangomonde?
Enye ingxaki mhlawumbi kukuba ukuhlukahluka kwezenkolo kudala kudlulileyo kunoko. Noko ke, iinkolo zexesha elidlulileyo, zihlala zibizwa ngokuthi "inkolelo" kunokuba zikhutshelwe inkolo kwaye zatshitshiswa. Ukuze ufumane ingcamango yento ebhalwe yiloo bhile kubantu namhlanje, ulinganisa indlela abasabela ngayo xa uchaza iinkolelo zamaKristu, zamaYuda kunye namaSulumane njenge "mythology." Ngokwenene leyo yinkcazelo echanileyo, kodwa abantu abaninzi "inkolelo" isichazamagama esithi "lobuxoki," ngoko ke bayasabela ngokukhuselekayo xa iinkolelo zabo zonqulo zibizwa ngeengcali.
Oko, ke, kusinika isigqibo esihle malunga nento abayicinga ngayo ngesiNorway , isiYiputa , isiRoma, isiGrike kunye nezinye iimfundiso zamagama: zabo iileyibhile ibinzana elithi "lobuxoki" kwaye ke asinakuzilindela ukuba zinike ezo nkolelo nayiphi na ingxaki ngqalelo. Kodwa inyaniso kukuba, abalandeli beenkqubo zenkolelo baphatha ngokungqongqo. Sinokuzichaza njengenkolo, nangona zilungele ukuba zikho konke-ziquka ukuba zikwazi ukuhamba ngaphaya kwenkolo ibe yindlela yonke abantu abahlala kuyo.
Ngokuqinisekileyo, abantu babenenkolelo enkulu. Enyanisweni, abantu baphatha le nkolelo njengokuba "yinyaniso" njengabaxhamli banamhlanje njengamaKristu (oko kuthetha ukuba abanye baya kuqonda ukuba amabali afana nomfanekiso xa abanye bebathatha ngokubhekiselele). Ngaba aba bantu bangalunganga?
Ngaba iinkolelo zabo zazingalunganga? Akunamntu nanamhlanje okholelwayo, oko kuthetha ukuba malunga nomntu wonke ucinga ukuba ayenzi ngcamango. Sekunjalo ngelo xesha, baqiniseke ngokupheleleyo ngenyaniso yeenkolelo zabo.
Ukuba kubonakala kungenakulungelelanisa ukuqhathanisa ubuKristu kunye neentetho zamaGrike , sinokwenza ukuthelekiswa okuqhelekileyo: ukuxhomekeka kobuxoki kwiintlanga. Kusenokwenzeka ukuba abantu abaninzi abaye baphila babekholelwa kwiintlanga-zintetho okanye iindidi zezilwanyana ezinjani, kungekhona i-monotheists. Ngaba bekungalunganga bonke? Yintoni eyenza ukuba i-monotheism ibe yinyaniso kunokuba iintlanga-ntetho okanye i-animism?
Ngokucacileyo, kukho ukuthelekiswa okuninzi esinokukwenza kunye neenkolelo zanamhlanje: amaYuda ayengamhloneli ngaphantsi kwamaKristu; AmaKristu ayingqinileyo kunamaSulumane; kunye nabalandeli beeNgqungquthela zaseMmbindi zaseMpuma azikho okanye abazinikele kuncinci kunabalandeli beenkolo zaseAsia, njengamaHindu namaBuddha. Zonke ziqinisekile nje ngeenkolelo zazo njengabanye. Kuqhelekile ukuva iingxabano ezifanayo kubo bonke "inyaniso" kunye "nokuqinisekiswa" kweenkolo zabo.
Asinakukweleta nayiphi na inkolo, eyadlulayo okanye yangoku, njengento ethembekileyo kunabanye nje ngenxa yokholo lwabalandeli. Asinakuxhomekeka ekuvumelaneni kwabaxhasi bokufa ngenxa yokholo lwabo.
Asinakuxhomekeka kwiinguqu ezithintekayo ebomini babantu okanye kwimisebenzi emihle eyenziwa ngenxa yenkolo yabo. Akukho namnye kubo ophethe iingxabano ezingaphethekanga kunoma yimuphi na. Akukho bani uxhasa ubungqina obunamandla ngaphezu kwanoma yiyiphi enye (kwaye nayiphi na inkolo egxininisa kwisidingo sokuba "ukholo" alinaso ishishini elingazama ukuziphakamisa ngokubhekiselele kubungqina bobugcisa nanini).
Ngoko akukho nto yangaphakathi kulezi nkolo okanye kumakholwa abo asenza ukuba sikhethe okunye okuphakamileyo. Oko kuthetha ukuba sidinga umgangatho ozimeleyo osivumela ukuba sikhethe enye, njengoko sisebenzisa imigangatho yokuzimela yokukhetha imoto ekhuselekileyo okanye ipolitiki efanelekileyo. Ngelishwa, ayikho imilinganiselo yokuthelekisa ebonisa ukuba nayiphi na inkolo iphakamileyo okanye inokuthi ibe yinyani kunabanye.
Usishiya phi? Ewe, ayibonakali ukuba nayiphi na inkolo okanye iinkolelo zonqulo zinyani. Oko kwenzayo kusitsho izinto ezimbini, ezibini ezibaluleke kakhulu. Okokuqala, ithetha ukuba amaninzi amaninzi amabango egameni leenkolo ayiluncedo xa kuvela ekuhloliseni indlela inkolo inokwenyaniso ngayo. Amandla okholo lwabalandeli kunye nendlela abantu abazimisele ngayo ngaphambili beza kufa ngenxa yenkolo akukhathazekiyo xa kuvela kumbuzo wokuba unqulo lunokuba luyinyaniso okanye lufanelekile ukukholelwa njenginyani.
Okwesibini, xa sibheke kwiinkcubeko ezahlukeneyo kufuneka siqaphele ukuba zonke azihambelani. Ukukubeka ngokulula: abakwaziyo yonke into yokuba yinyani, kodwa bonke bangaba buxoki. Abanye bazama ukujikeleza ngoku ngokuthi bonke bafundisa "iinyaniso eziphezulu" ezihambelanayo, kodwa oku kulandelwayo ngenxa yokuba abalandeli beenkolo abazithobeli nje "ezi nyaniso eziphezulu," balandela amabango athile zenziwe. Ezi zimangalo zecawa yazo zonke iinkonzo azikwazi ukuba zinyani. Noko ke, banako konke ukuxoka.
Ukunikezelwa konke oku, ngaba kukho nawuphi na olungileyo, isandi, isingqiqo, isisiseko esivakalayo sokuqhawula ukuchazwa kwesinye sesithethe esithile kwesinye salezi nkonzo ekufuneka siphathwe njenginyani xa abanye bephathwa njengamanga? Akunjalo ngokungenakwenzeka ukuba ukuchazwa kwesinye isithethe esivela kunqulo olunye kunokunyaniseka emva koko konke, kodwa ukuhlukahluka kweenkolelo kuthetha ukuba nabani na obiza oku kuya kufuneka babonise ukuba unqulo lwabo olukhethiweyo lukwazi ukunyaniseka kwaye inyaniseke ngaphezu kwazo zonke ezinye.
Oku kungabi lula ukwenza.
Indlela ye-Embryonic Homologies Inkxaso ye-Evolution
Njani kwaye Kutheni Inyoka Yayikwazi Ukuthetha?
Inkcazo ye-Fundamentalist Godist
I-Agnostic for Beginners - Iinkcukacha Eziphambili Nge-Agnostic and Agnostics
Ukuxoshwa kwamaKatolika - Indlela yokukhutshwa kwiCawa yamaKatolika
Ukwahlukana phakathi kweNontheist kunye noThixo
Yintoni yobuKristu? Yintoni umKristu?
Ukwahlukana Phakathi Kwenkululeko KwiNkolo Nenkululeko Yenkolo
Ukuziphendulela okuMncinci ngokuchasene noMbane: Yintoni eyahlukileyo?
Ipropaganda Vs Persuasion
Inkqubo Elula Nendlela Elula Yokuba Ngakholelwa KuThixo
I-Biography yeThugood Marshall
Indima Yembala kwiMaphu
Indlela yokudlala iFomen Foursomes Golf Format
I-Admissions yaseYunivesithi yaseMars Hill
15 ye-Funniest Post-Anesthesia IiVideos
Unamahlwempu amaHotes kaHillary Clinton
I-Green Fee kwiGalofu: Yintoni Eyona nto, Into Eyibandakanyayo
Ikholeji ye-GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Kutheni iNzululwazi kunye noPhando lweNzululwazi azikho iinkolo
I-oyile ivela kwiDinosaurs - Inyaniso okanye iFiction?
Isingeniso kuMthetho kaMendel woNcedo oluzimeleyo
Umkhombe weThianyuan (iChina)
Iintsingiselo kunye nemizekelo yeMicphemes ekhethiweyo
Indlela yokudala iThala leeThala leNgcaciso
Erica Friedman's Top 10 Yuri Manga
Indlela yokwenza Intuthu iphume kwiVolcano
Biography kaWilliam Morris
10 Amazwi malunga ne-Allosaurus
Iincwadi ezilungileyo zezingane zeHalloween
I-Wildlife yeZiyon National Park
FILLMORE Igama lomnini igama kunye nemvelaphi
Amanqaku angama-10 aphezulu eDinosaur
Yintoni I-Heck 'Ukuthobela Imoto'?
U-Thomas Jefferson, uGentleman Architect kunye noMntu woKuvuselela
Ukuxelela ixesha kwi Mandarin Chinese
I-Appalachian Plateau Geology kunye neeMpawu ezimangalisayo